हत्यारालाई प्रेमपत्रदेखी विकिनीवाला फोटोसम्म, अपराधीसँग किन प्रेममा पर्छन् महिलाहरु ? - Lokpath Lokpath
२०७५, २६ पुष बिहीबार ०७:५७
प्रकाशित मिति : २०७५, २६ पुष बिहीबार ०७:५७
जेलमा पाएको प्रेमपत्र…..
वाशिंगटन पोस्टमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार यी महिलाहरुमध्ये एक महिलाले आफ्नो प्रेमपत्रमा ह्यासट्याग #TEAMCHRIS र #LOVEHIM को प्रयोग पनि गरेकी छिन् । त्यसैगरी अर्की महिलाले आफ्नो प्रेमपत्र मा लेखेकी छिन् कि उनी त्यो पत्र लेखिरहँदा एकदमै डराएकी छिन् किनकी त्यो उनको जीवनकै पहिलो प्रेमपत्र हो ।
नेपालको यो घटना ….
‘सिरियल किलर’ विकिनी किलरका नाममा चिनिने उनी आफ्ना बुबाबाट अपमान सहेका कारण कुख्यात छोरा बनेर बाबुलाई आफूले अभिभावकत्व नदिनुको ग्लानी गराउने भन्दै आपराधिक घटना संलग्न थिए ।
उनले हरेक घटना एकै किसिमले गर्थे ।
शोभराज सुन्धाराको केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा थुनिएकै बेला आफूले बिहे गरिसकेँ भन्दै घोषणा गरेकी निहिता विश्वास त्यतिखेर जम्माजम्मी २० वर्षकीमात्रै थिइन्।
शोभराजको उमेर त्यतिखेर ६४ वर्षको थियो।
तर शोभराजको यो पहिलो विवाह होईन न त पहिलो अफेयर्स नै । चाल्र्स विवाहित पुरुष हुन्। उनकी एक छोरीसमेत छिन् ।
एक पत्रिकाले उनलाई जेलभित्रै प्रशन तेर्साएको थियो, ''तपाईं फोनमा पनि खुबै झुन्डिनुहुन्छ रे । कसलाई फोन गर्नुहुन्छ ? ''
शोभराजको जवाफ यस्तो थियो '' धेरैजसो त निहितालाई नै गर्छु । केही समययता उनी मलाई भेट गर्न आएकी छैनन् । त्यसबाहेक संसारभर मेरा धेरै महिला साथी छन्, जो मलाई असाध्यै माया गर्छन् । उनीहरूसँग कुरा गर्छु । फोन पनि चाहेजति गर्न पाइँदैन । जेलमा अनेकन असुविधा छन् । त्यसका बारेमा मैले कानुनी लडाइँसमेत लडें, केहीमा सफलता पाएको छु । केही विषयमा अझै लडिरहेको छु ।''
काठमाडौं । भीषण हिमपातका कारण अधिकांश क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । सडकमा